ISIBANGELE - Ukuphikisa Imibono Yobuhlobo
I-CAUSE (Ukubambisana Ngokulwa Nemfundo Yezocansi Engaphephile)
Umlando weTransgender kaDkt Quentin Van Meter
Abazali Baxoxa Ngemiqondo Yezobulili Yezikole Eziphephile
AmaTransgender Ukuzisola Amavidiyo Ngabashintshi
I-Dianne Colbert Setha Ividiyo Kuthi Ukuphepha Kwezikole Eziphephile
Odokotela, ama-transmiters ex kanye nabahlaziyi bezenhlalo baxoxa ngemibono yeTransgender
Ividiyo engu-12 kaProfesa John Whitehall isethwe kwi-Childhood Gender Dysphoria
Imibhalo Engobuchwepheshe Yezinkinga zeTransgender
Izindatshana zikaProfessor John Whithall Professional on Gender Dysphoria
UWalt Heyer - Ukuzisola kweTransgender
IZINHLELO ZEZIKOLO EZIPHEPHILE
ZONKE IZINYATHELO ZESIKOLO SEPHEPHA
Izinto Zokufundisa Zesikole Eziphephile
Bazali Bakhuluma Ngezinhlelo Eziphephile Zobulili Kwezikole
Mayelana NATHI - Izinjongo Zethu
QAPHELA Ividiyo Kuzikole Eziphephile
Inqubomgomo yobumfihlo. Imigomo nemibandela
Ukuzikhulula kanye ne-copyright
Uhlelo lwe-Safe Schools selufakiwe ezikoleni ezinqamula e-Australia lifundisa imibono yezobulili ye-LGBT ezinganeni ngesikhathi lapho ukuzazi kwazo ngokocansi kuthuthuka nalapho zisengozini yokudideka ngokocansi. I-Australia ngemuva kwalokho ibone ukuqhuma enanini lezingane eliyiswa emitholampilo yezobulili. Iwebhusayithi ye-CAUSE inezindatshana eziningi zobungcweti kwi-transgenderism, Gender Dysphoria, Conversion Therapy, ushintsho lwezocansi kanye nezikole eziphephile, ngochwepheshe abanjengoSolwazi John Whitehall, uSolwazi Dianna Kenny nabanye abaningi.
Imibono Yezobulili Ezikoleni.
Amaphepha ochwepheshe kwiTransgenderism.
Odokotela bezokwelapha bachaza amaqiniso weTransgenderism.
USolwazi John Whitehall Ubhala kwiQuadrant Magazine ngeGender Dysphoria.
AmaHormone Blockers nazo zonke izinto iTransgender.
Ukwelulekwa nokwelashwa okusebenzayo.
Ababili besifazane abathandana nabesilisa, i-gay ex kanye nengxoxo ex mayelana nokushiya izimpilo zabo ze-LGBT zangaphambili. Abanye abangu-13 bahlanganyela izindaba zabo ezibhaliwe mayelana nokuthi ukwelulekwa kubasize kanjani.
Iwebhusayithi Yokuzisola Ngocansi kaWalt ​​Heyer.
UWalt Heyer waphila njengowesifazane uLaura iminyaka eyi-10 ngaphambi kokuhlonza futhi evuma ukuthi umuntu akakwazi ukuguqula ubulili babo.
Udinga Ukuthola Abeluleki.
Imibono Yezikole Eziphephile Yobulili.
Abafundi ku-Class Roll Playing LGBT Behaviors
Uhlelo lwe-Safe Schools lwemiqondo yezobulili lwathunyelwa yiqembu labantu isimo sabo esasihloniphekile ngoba ekuqaleni sasenzelwe ukubhekana nenkinga yokuxhashazwa.
Lokho okuye kwaba esikhundleni salokho kwaphoqa imingcele ngaphezu kwesilinganiso esasikhokhelwe sona. Simi ndawonye futhi sisekela uHulumeni Wombumbano Wobumbano ekususeni uxhaso nokuxhasa lolu hlelo ngendlela oluyiyo manje.
I-ajenda edudulwa wumbimbi lweZikole Eziphephile ihlose intsha nezingane ngesikhathi esibucayi kakhulu futhi ihlose ukuyihlukanisa nengqikithi yemindeni yabo yendabuko kanye namagugu omphakathi wokuxhasa zonke izakhamizi. Sicela ukuthi uphendukise ukunaka kulolu hlelo futhi uye ohlelweni oluqondiswe kangcono ekubhekaneni nokufakwa nokwamukelwa HHAYI okusekelwe futhi okucheme nobulili nokuya ocansini.
Ingane Yobulili Dysphoria. Uchungechunge lwamavidiyo ayi-12 ngemibhalo ebhaliwe.
Ukudideka Ngocansi. I-Hormone Therapy. Ucwaningo Lokwehliswa Kwezocansi. Ukwelulekwa Ngokwengqondo. Kuchazwa I-Transgenderism.
UPROFESA JOHN WHITEHALL.
Buka amavidiyo ngesiNgisi noma sebenzisa umhumushi we-Google kuleli khasi ukufunda okubhaliwe ngolimi lwakho.
Noma yimuphi umzali uyazi ukuthi lapho ekhulisa abantwana, kunezindawo eziningi okungaba nzima ukubhekana nazo, futhi ingane ngayinye idinga uhlelo lwazo lokunakekelwa. Kodwa sonke siyazi ukuthi umlilo unobungozi, ngakho-ke sixwayisa izingane zezingozi ngendlela abangaziqonda ngayo. Asizivumeli ukuba bafunde ukuthi umlilo uyingozi ngokubavumela ukuthi badlale nayo. Amacembe nobuhlungu beyozizwa isikhathi eside ngemuva kokuba umonakalo ngabe ukwenze uma kunjalo. Ngendlela efanayo, kungani kufanele siceliwe ukuba sivumele izingane zethu ukuba zibandakanyeke ezinhlelweni ezenza izingane zicele ukuthi ziqede ukwethemba kwabo emkhayeni wabo ngokuhlinzeka isiqondiso esidingekayo ukuze zisebenze ngendlela yazo ngokukhulelwa, ukuvuthwa nokuthuthukiswa futhi ngokuya "kwezemfundo" ngaphandle kwe-anti-bullying kanye nokwamukela ukuhlukahluka. Noma kunjalo yilokho uhlelo lweSchool Schools olucela ukuthi sikwenze.
Ilungu lePhalamende lase-Australia uMnu Andrew Haste.
Ilungu lePhalamende u-Andrew Hastie ukhuluma ngohlelo "Lwezikole Eziphephile" ePhalamende lase-Australia.
Qonda i-ajenda futhi ulinganise inkundla yokudlala - thola ukuthi kungani lolu hlelo lufundiswa kuphela eminyango evaliwe futhi ngaphandle kokukhetha komzali. Uma ukuphepha kwezingane zethu kubaluleke kakhulu, kufanele kuvuleleke ekuhlolweni nasekubandakanyeni kwabo bonke abathintekayo ekukhuliseni abantu abasha ukuze baqonde ukuthi singabantu abahlukahlukene, abalinganayo ngazo zonke izindlela. Cela ikhophi yohlelo lwezifundo, futhi uma unenhlanhla yokuthola isikole esizimisele ukudalula okuqukethwe kwaso, lungela ukuqonda ikhwelo lesenzo esilibeke phambi kwakho.
Umklami we-Roz Ward weZikole Eziphephile uyavuma ukuthi Izikole Eziphephile azibheki ngokuhlukunyezwa.
Umklami weRoz Ward woHlelo Lwezikole Eziphephile uyavuma ukuthi Izikole Eziphephile akuyona eyokuxhashazwa.
Kulabo abangakakulungeli ukunikela amalungelo akho njengomzali wokufundisa nokuqondisa izingane zakho ngesigaba esivumelanayo esivumelanayo esivamile futhi esididayo sokukhulelwa nokuvuthwa, sicela usebenze! Manje yisikhathi sokujoyina ukusekelwa kokususwa kwalolu hlelo lokuhlola nokuhlukanisa.
Umama ukhuluma ngokuthola imibono yobulili indodana yakhe efundiswa ngayo esikoleni.
Indaba kaCella ngezingane zakhe kanye noHlelo “Lwezikole Eziphephile” esikoleni sabo.
Nakhu ukuthi ungakwazi kanjani ukuxhuma kabusha umphakathi wethu ukuze uhlakulele umqondo onamandla wokufaka nokwamukelwa:
Khuthala esikoleni sakho. Thola ukuthi yiziphi izinhlelo zomphakathi abanazo njengamanje zokubungaza abantu abahlukile abakha umphakathi - bahlanganyele futhi bagubhe imicimbi eminingi izikole ezibeke ukuxhasa wonke amalungu omphakathi wesikole sabo - hhayi nje labo abanezinhloso ezingabhekiswa kwezocansi ubunikazi njengesisekelo sokuba.
Thola ukuthi isikole sakho sifundisani nezinhlelo abazisebenzisayo ukufundisa izingane nentsha ngokwamukelwa KONKE izinhlobo zakhona - mayelana nokulingana, uzwela, nokuqonda ukwehlukahluka ngazo zonke izinhlobo. Sekela isikole sakho ngokwaziswa nokuqonda ukuthi UKUPHEPHA akulingani nalabo abavezwe ngokocansi nje.
Buyisa igama elithi UKUPHEPHA - qinisekisa ukuthi akusona isihlonipho sokulungiswa kwezingane ezingaphezu kokuqonda kwazo kanye nokuthambekela kwemvelo kokufuna ukwazi. Izingane zivuthwa ngamazinga ahlukene futhi lolu hlelo alukuvumeli lokhu. Kuphoqa imibono kanye nokuthatha izinqumo ezindaweni ezibucayi ngaphambi kokuba izingane eziningi zikulungele ukuqonda ubukhulu nobude besikhathi sezinqumo ezenziwayo. Ukuvuthwa kanye nokuvuthwa ngokocansi AKUKHO ukuphoqelelwa futhi indlela yokususa ukubandakanyeka kwabazali lolu hlelo olwamukelayo, akuyona inqubo yezempilo okufanele sihlale phansi siyamukele. YITHI CHA! futhi uqiniseke ukuthi isikole sakho siyazi ngesinqumo sakho.
Uma izingane zakho zingakabi esikoleni, thola ngezikole endaweni yakho ngokuvakashela futhi ucele ukuhamba phakathi nesikhathi sokuphelelwa isikhathi noma isikhathi samahhala. Bona ukuthi izingane zixhumana kanjani futhi zibuka ukuthi izingane ezamukelekayo ze-NATURAL zinabanye abakwenzayo.
Bhala endaweni yakho MP noma uNdunankulu futhi ubazise ukuthi usekela isimo se-Federal Government ukususa lolu hlelo ukuze uthole uhlelo olubala futhi olusebenzayo. Ukuze uvikelekile ukuthi usho okungaphezu kokuya ocansini nokufaka ukwamukelwa kuzo zonke izinhlobo zawo. Uhlelo olusekela umndeni bese luvumela ukuba lusebenze ekufundiseni isizukulwane esilandelayo izindinganiso kanye nokuqonda okuyinhloko uhlelo lweSchool Schools olufuna ukuluhlupha.
NGAPHAMBI kokuba uvote, qiniseka ukuthi uyazi ukuthi yini umuntu ozoyikhethayo kanye nezinhlelo abazozivumela. Thatha ivoti lakho ngokujulile futhi uthumele umlayezo kulabo abazokhethwa ukuthi ngeke ubekezelele ukuhlwithwa kwamalungelo omndeni.
Uhulumeni anganikeza kuphela lokho esikufunayo, uma sibatshela kuqala. Qonda futhi ugubhe ikhono lakho njengomzali ukuqondisa ingane yakho. Uma unenkinga ekukhulumisaneni nasekuqondeni indima yakho, funa futhi ubhalise izinhlelo zokusekela kwabazali eziqhutshwa izikhungo zomphakathi zendawo. Akuyona indlela ephephile yokuvumela izingane zakho ukuba zihileleke ohlelweni oluvalile iminyango yalo futhi lukhuthaza ukufihlakele futhi "ubumfihlo" buqhutshelwa yizinketho okuthiwa yiSchool Schools.
Ungavumeli lolu hlelo lukubeke phansi-TEAR IT DOWN!
Xhumana nathi. I-imeyili: imbangela.victoria@gmail.com
Sisize ukuvikela izingane zethu.
Nikela ku-CAUSE. Ibhange: I-NAB BSB: 083-547 ACC: 87-690-0206
Copyright © 2021 I-CAUSE (Ukubambisana Ngokulwa Nemfundo Yezocansi Engaphephile)